खरिपाटी क्वारेन्टाइन ! (भिडियोसहित) – Mero UK
खरिपाटी क्वारेन्टाइन ! (भिडियोसहित)
२७ माघ, काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटीमा अवस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र परिसरमा सरसफाइ गर्न कामदारलाई भ्याई-नभ्याई छ । दराज लगायतका सामानहरु बाहिर चौरीमा निकालिएका छन् । चोटा-कोठा धमाधम सफा पारिँदैछ । हतारमा यसो गर्नुको कारण हो- चीनको वुहानबाट ल्याइने विद्यार्थीलाई १४ दिन ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्ने बन्दोबस्तको तयारी । सरकारले फागुन ३ गते वाइड बडी विमान चीन पठाउँदैछ ।
चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकहरु स्वदेश फिर्ता लगिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि अहिले चीनको वुहानबाट आफ्ना नागरिक फर्काउने तयारी गरिरहेको छ । उनीहरुलाई ल्याएर खरिपाटीमा रहेका प्राधिकरणका भवनहरुमा राखिनेछ ।
चीनमा रहेका नेपालीलाई फर्काएर केही समय राख्नका लागि खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुइटा भवन खाली गराइएको छ । प्राधिकरणको दक्षिणतर्फको सबभन्दा तल रहेको प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल भवन खाली गराइएको हो ।
चीनबाट नेपाल ल्याइने नागरिकलाई राख्ने विषयले अहिले खरिपाटीका वासिन्दामा चिन्ता फैलिएको छ । आखिर के हुँदैछ त खरिपाटीमा अहिले ?